Ukuboshwa akumuqedanga amandla emculweni | News24
LAST UPDATED: 2018-11-12, 18:56
Ukuboshwa akumuqedanga amandla emculweni
isithombe: sithunyelweUSibonelo Ngcobo owaziwa ngelika Mageja I 47
UMCULI waKwaNyuswa uSibonelo Ngcobo owaziwa ngelika ‘Mageja I 47’ uthi ukucula umculo wohlobo lwe-Rap kumenze wakhula ngendlela eyisimanga kumkhakha wezomculo kusukela ngo-2007.
UMageja akasiye nje umculi kodwa ubhala izingoma aphinde aziqophe ngaphansi kwenkampani iRieco Bird Media.
Uthe: “Umculo wami uthandwa iningi labantu emphakathini. Umculo wami ungenze ngakwazi ukuzi bandakanya nomphakathi nokuthi ngazi ukuthi yikuphi umphakathi okudingayo.”
Njenge ningi labantu abasha uMageja uke wahlangabezana nobunzima empilweni ngensikhathi ehlangana nabangani abebe sebenzisa izidakamizwa ezingekho emthethweni.
Uthe: “Kube nzima kakhulu empilweni yami ngesikhathi ngisebenzisa izidakamizwa ezingekho emthethweni. Konke lokhu kudale ukuthi ngiboshwe ngo-2009, kodwa ukuboshwa kwami akungenzanga ngaphela amandla kwezomculo ngoba ngakwazi ukusungula iqembu labaculi sino zakwethu owaziwa ngelika Ngqondo.”
Sekuphele iminyaka eyi-8 uMageja aphuma ejele futhi uqopha ucwecwe ngaphansi kwenkampani Rieco bird Media.
Lolu cwecwe lune sihloko esithi Thoughts and Motions EP luhlanganise abanye abaculi kubalwa uDondo, uMzogologo, uFeleba SK with Da Bang and Spot On.
Ukhiphe ucwecwe ngaphambilini olune sihloko esithi Mama ehlanganyele noFeleba SK.
“Umculo wami unabalandeli abaningi emphakathini njengoba ngihlezi ngikhuthalela ukuhlela imicimbi eyahlukahlukene kubalwa eyokunandisa, eyokuthuthukisa nokusiza umphakathi nokuqopha izingoma ezehlukahlukene. Ngine culo engilenze ngonyaka odlule elibonga omama bethu, leli culo lithakaselwe amalungu omphakathi futhi yilo elenze ukuthi bebe nentshisekelo yokulalela amanye amaculo engiwa qophayo.”
UMageja uchaze lolu cwecwe njenga lolo oluhlanganise izinhlobo eziningi zomculo kubalwa i-hip-hop, i-poetry [izinkondlo] ne-RnB.
Uthe: “Okuhle wukuthi umbhalo wama culo okulolu cwecwe aculwa ngesingisi nangesiZulu.”
Uma uthanda ukuzizwela umculo kaMageja vakashela iwebsite ethi: www.audiomack/rieco-bird-media
noma uvakashele ikhasi le-Facebook Page elithi: Mageja I 47.
Uma uthanda uMageja anandise emcimbini ungathumela umyalezo ngekheli le email elithi:riecobirdonine@gmail.com noma ushayele inombolo ethi:063 398 9769.